We bafowethu, On lesi sifundo sizobe ukukwazisa indlela efanele ukuthola Spotify Premium APK kamakhalekhukhwini yakho ye-Android. Uma ungumuntu amangalisayo umculo lover nosuku lwakho iphela umculo, wena ngaphezu kwalokho ziqapheleni umculo noma kunini uma ukusebenza, ke lo mbhalo nje ngawe. Umculo kuzokusiza ukuphuma ucindezelekile futhi wenze okuqukethwe.
Kunezindlela eziningana izinhlelo zokusebenza ezivumela ukuba ziqapheleni umculo kuyi-Internet noma wayithola kumazwe e emshinini wakho. Njengoba sonke sazi, Spotify is kunakwe best music lokusebenza-Android, Nokho akusiwona laphaya eziningi izindawo ngamazwe. Funda lo mbhalo mayelana Spotify premium apk-Android.
Spotify Premium apk uhlelo lokusebenza enikeza Okufakiwe umculo digital nama-podcasts, endaweni you fuza heed futhi ukuthola amashumi ezigidi songs for free. Lolu hlelo lokusebenza unakho ukushintsha ku umngane wakho omkhulu njengoba izinga lokusebenza yesibili none.
Spotify Premium apk kungaba mahala. It Ngaphezu kwalokho Isebenza kunoma iyiphi umshini endaweni nizuze kuzo zonke izingoma zakho ozithandayo fuza heed kubo everytime udinga. Kulolu hlelo lokusebenza, ungase udale uhlu lwakho lwadlalwayo ukuthi ungase entry nganoma isiphi isikhathi, noma nawe ungakhetha olunye uhlu lokudlalwayo ku-intanethi. Uthola entry ngqo abaculi kanye albhamu ziqapheleni.
Kunezindlela eziningana amaphakheji like khulula, isivivinyo, version premium futhi ongenamkhawulo lensiza. Lots of ufisa ziqapheleni iculo on-line ne out ukulanda nabo, ziningi izinhlelo zokusebenza ngabo, Nokho abanayo ongakhetha eziningi noma ube Izikhangisi amaningi kakhulu, noma ngeke khulula.
Download Spotify Apk Mahhala
Kunezindlela eziningi zokusebenza ukulalela umculo, Nokho akekho kubo uyogcwalisa wena ngemva kwemizuzu embalwa. Esimeni ungumkhandlo langempela umculo lover ke kufanele azame Spotify i-Android ngoba ukalwe four.5 aphume 5 ngaphakathi Google Play oseduze ngamakhulu abantu.
plus, lolu hlelo lokusebenza has a esibonakalayo ecacile izinto ezahlukene ezinhle elenza elinokwethenjelwa nsuku ukusetshenziswa njalo. Abantu uthole injabulo Spotify, njengoba ungase ucabange namanye okulandwayo ezigxeka.
Uhlelo lokusebenza Premium Spotify kuyinto lokusebenza umculo yokusakaza ividiyo nabanye ongakhetha engeziwe, elihambisana podcast abahlinzeki, lokho kusho ungakha umphakathi eyamukelekayo umculo bese ikunikeza Ubuchwepheshe kakhulu.
Kumele usebenzise Spotify Premium, bese uthole okungcono umculo Ubuchwepheshe, futhi nawe ungakwazi ukuthola iculo kusukela izinhlobo assorted amaphakheji kulolu hlelo lokusebenza. Khetha izindlela ezifanele elisebenzela okufunayo futhi izidingo.
Vele uchofoze on the ukuthola inkinobho ukuqala out ukuthola ngomzuzu owodwa kuphela bese bafunde ukumisa inqubo lensiza. Qinisekisa ukuthi ungaphindi weqa isinyathelo noma enze amaphutha.
Kusesikhathini Febhuwari 20, 2018
Okufakiwe 200,00zero,00zero +
Yethula Model eight.four.39.673
Idinga i-Android four.1 + (SDK 16)
Unjiniyela Spotify Ltd.
Score impahla sokuqukethwe Kulinganiselwe 12+
Izinketho - Spotify premium apk-Android
Kunezindlela eziningana ongakhetha Spotify Premium. Uzokwazi ukudlala noma iyiphi imizwilili ufisa ukudlala e umakhalekhukhwini wakho. Ngaphezu kwalokho, uma kwenzekile ukuthola Spotify Premium-APK, nawe futhi ungasho ukuthola noma iyiphi imizwilili mahhala mahhala. Kule-version premium, ungase ube mahhala Izikhangisi pop-up nazo zonke izinhlobo zezinsimbi Izikhangisi ogaxekile. Omunye izinketho ngaphezu kwalokho kukhulunywa ngalo.
Lolu hlelo lokusebenza ngokuphelele isikhangiso khulula futhi gained't usathola inhlobo izigelekeqe noma malware.
Uzothola angenamkhawulo Ukweqa umsebenzi lapho lokusebenza bendabuko ungatholi ngayo izikhangisi ukuphuma.
Kulolu hlelo lokusebenza, idrayivu abaqeda waphakamisa izivimbelo okungahleliwe. Lolu hlelo lokusebenza khulula ukuthola futhi ungase sakaza umculo angenamkhawulo mahhala.
Nawe ungathola zonke izingoma umakhalekhukhwini wakho for free izinga phezulu fuza heed kubo everytime ufisa ukuba.
Nawe ungavumelanisa izingoma zakho ku zobuchwepheshe zakho ezahlukene noma umakhalekhukhwini, iphilisi kanye ngisho kukhompyutha yakho naku laptop yakho. Uzokwazi ukulalela eziningi imisakazo mahhala nge out kokukhokha imali.
Indlela umuntu angayinqoba Setha Spotify-APK ku-Android
Vula izilungiselelo kamakhalekhukhwini wakho, Ngo izilungiselelo, kubalulekile ukuvumela umisele kwimithombo engaziwa. Iya ku Amasethingi - Ukuphepha - umkhaza Imithombo engaziwa.
Vula ifayela elandiwe ngendlela siqondise ifayela noma nje ukuvula ifayela kusukela okulandwayo uhlu lokuhlola. Bese uchofoza ku Misa bese ulinda imizuzwana embalwa nje. Futhi uzophawula ukuthi isethi yakho kuze kuba inzuzo.
Manje vula uhlelo lokusebenza okuyinto wena umane ufake manje bese hlola ndawonye nge-akhawunti yakho Spotify. Esimeni lapho ungenayo i-akhawunti, bese uya website yabo esemthethweni futhi ubhalisele i-akhawunti
Manje vula uhlelo lokusebenza bese hlola ndawonye nge-akhawunti yakho noma ngabe kunini ungena nje ungene ngemvume futhi uzilungiselele. Manje kudingeka asebenzise lolu hlelo lokusebenza umakhalekhukhwini wakho ngezinkinga noyedwa.
Uma kwenzeka uhlangana amaphutha ngendlela efanele ukuze kukhawulwe lensiza, ke nje ngixhumane VPN US enganyelwe. Uzoba ngokuphelele uthole leli phutha eNdiya omunye izindawo ngamazwe. Uzokwazi ukuba umane ukubhekana ukusebenza bethu Spotify Premium apk. Cishe uye kahle ungene ngemvume, ungabona ku-smartphone yakho zonke izinketho we Spotify premium e iminwe yakho. Siye sazama lesi senzo, futhi ngempela lusebenza kahle ngathi njengoba sazama, futhi kunjalo usebenza.
Lokho konke ngosuku samanje, utadisha konke mayelana Spotify Premium apk-Android. Ziningi isizathu sokuthi kungani kungcono ukusebenzisa lolu hlelo lokusebenza ngendlela zokusebenza ezahlukene. Uthola kwesithi egcwele nge noyedwa inhlobo ugaxekile yokukhuthaza izimpikiswano ezahlukene. Kule nguqulo Mod of Spotify Premium ze-Android, ungase uthole ifayela le-MP3 kanye 320 kbps, okuyinto kunakwe umculo umhlabeleli. Uzokwazi ukuba ngisho udlale lo mculo ohlelweni umsindo, uhlelo umsindo noma ama-headphone. Esimeni lapho bethola nephutha kulo lonke usethe inkambo, umane suka amazwi. Iqembu lethu uzokusiza ukuthi. Ngaphezu kwalokho, uma kwenzeka bethola kuwusizo, usabe zonke bomshado yakho futhi abathandi bomculo ukunikela ngendlela abajabula.
Download inguqulo yakamuva ye-ifayela Spotify Umculo .apk
udoli: eight.4.44.661 (29624917)
Ukuqhubeka olusha: Mashi 12, 2018
Ifayela Dimension: 37MB
Iya Common Okuthunyelwe :
Gloud Imidlalo apk
Vigo Isiqophi – Ngaphambili Hypstar 3.8.1 i-APK
UMBUSO IZINHLIZIYO Union X [Isiphambano] .APK Download Izinhlelo For Mobiles
Gardenscapes apk – Mahhala GAME Okuvamile – Kuhle Apps for Mobiles
Clash of Lights apk – Money Unlimited mod apk
EaseBackup 1.04 APK-Android – Kuhle Apps for Mobiles – lwakamumva
Download Hungry Shark Umhlaba MOD-APK 2.8.0 [Imali Unlimited]
Google Play Isitolo apk Thwebula – Kuhle Apps for Mobiles